Covid-19 ဆိုးဝါးတဲ့ အီတလီနိုင်ငံတွင်း သက်ရောက်မှု - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
အီတလီနိုင်ငံ Venice မြို့ (သတင်းဓာတ်ပုံ - ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၀)
လက်ရှိကမ္ဘာမှာ Coronavirus ပိုးဒုတိယမြောက် အများဆုံးကူးစက်နေတဲ့ အီတလီနိုင်ငံမှာ တနိုင်ငံလုံး အသွားအလာတွေ မလိုအပ်ရင် မလုပ်ကြဖို့ တားမြစ်ထားပါတယ်။ လုပ်ငန်းတွေ ကျောင်းတွေ ပိတ်ထားတဲ့ကြားက လုပ်ငန်းတွေ ဆက်လက်လည်ပါတ်နိုင်အောင်း ကျောင်းသားတွေ စာဆက်သင်နိုင်အောင် ကြိုးစားလုပ်နေကြတယ်လို့ အီတလီမြောက်ပိုင်းမှာနေတဲ့ မြို့ခံက ပြောပြပါတယ်။ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွေကလည်း ဒုက္ခရောက်နေသူတွေအတွက် အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတယ်လို့ ပြောပါတယ် အပြည့်အစုံကို မစုမြတ်မွန်က ပြောပြပါမယ်။
Coronavirus ပိုး ကမ္ဘာမှာ ဒုတိယမြောက် ကူးစက်မှုအများဆုံး အီတလီနိုင်ငံမှာ လက်ရှိပိုးကူးစက်နေသူ တသောင်းကျော်နဲ့ သေဆုံးသူ ၆၃၀ ထက်မနည်း ရှိနေပါတယ်။ Virus ပိုးကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကို တားဆီးနိုင်ဖို့ အီတလီအစိုးရက တနိုင်ငံလုံး တနေရာကနေ တနေရာ သွားလာမှုတွေကို မလိုအပ်ရင် မလုပ်ကြဖို့ တားမြစ်ထားပါတယ်။ ကျောင်းတွေကိုလည်း ပိတ်ထားသလို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများကလည်း အကန့်အသတ်နဲ့သာ လည်ပတ်နေကြပါတယ်။ စားရေးသောက်ရေးအတွက် ဈေးဆိုင်တွေဆက်ဖွင့်ထားပေမဲ့ အဝင်အထွက်တွေကို ကန့်သတ်ထားတယ်လို့ Treviglio မြို့မှာနေတဲ့ ဒေါ် Virginia King သွယ်နိုင်ဝင်းက ပြောပြပါတယ်။
ဒေါ် Virginia King သွယ်နိုင်ဝင်း။ ။အခုတော့ super market တွေ တယောက်ချင်းပဲ သူတို့က သွင်းတယ်လေ။ ဟိုလူတွေ ပြန်ထွက်မှ ၀င် အဲ့လိုပေါ့... အ၀င်အပေါက်ဝကို သူတို့လုပ်ထားတယ်။
တနိုင်ငံလုံး အသွားအလာတွေကန့်သတ်ထားချိန်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ကျောင်းတွေကတော့ လည်ပတ်မှု ရပ်မသွားအောင် ကြိုးစားနေကြတယ်လို့လည်း ပြောပြပါတယ်။ Online ပေါ်ကနေ ဆက်ပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ် Virginia King သွယ်နိုင်ဝင်း။ ။ ဒီ remote working တွေလုပ်ကြတယ်။ smart working လို့လည်း ခေါ်တယ်။ အီတလီကတော့ သူတို့ နာမည်တပ်လိုက်တာပေါ့။ အဲ့ Technology သမားတွေက အရမ်းကို အလုပ်လုပ်နေရတယ်။ They trying to makeaplatform to work. ကျောင်းတွေကသာ ပိတ်လိုက်တာ ဆရာတွေ၊ ဆရာမတွေက အလုပ်လုပ်နေရတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကလေးတွေကို homework တွေ ပေးရတယ်။ correct လုပ်ရတယ်။ သူတို့တွေ ညမိုးချုပ် ၁၂ နာရီ အဲ့ဒီလောက်ထိကို သူတို့ Prepare လုပ်ရတယ်။ ကလေးတွေကလည်း homework တွေလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ ၆ နာရီကျောင်းတော့ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ homework တွေတော့ လုပ်နေရတယ်ဆိုတော့... actually quite occupied ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာတွေက မနေ့တနေ့ကအထိ ကလေးတွေက အပြင်ကတော့ ထွက်လို့ရတယ်လေ။ တယောက်နဲ့ တယောက် ပူးကပ်ပြီးတော့ မနေရဘူးဆိုပြီး ပြောထားတော့ ကလေးတွေက parks တွေသွားပြီးတော့ ပူးပူးကပ်ကပ်နဲ့ အရမ်းကစားကြတာဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ ပြဿနာလေးတွေ နည်းနည်းတော့ ရှိတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အပြီး အိမ်ထဲမှာ လှောင်နေတာမဟုတ်ဘူး။ အပြင်တွေတော့နည်းနည်းတော့ ထွက်ကြတယ်ဆိုတော့။
မစုမြတ်မွန်။ ။အီတလီဆိုတာကနော်။ မိသားစုတွေ အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေ သိပ်ကို နီးနီးကပ်ကပ် ရှိကြတာပေါ့နော်။ ဆိုတော့ အခုလိုမျိုး အစိုးရက တောင်းဆိုထားတဲ့အထဲမှာလည်း အဖိုးအဖွားတွေဆိုရင် မြေးတွေနဲ့တောင်မှ တက်နိုင်ရင် မတွေ့တာမျိုးအထိတားထားတယ်ဆိုတော့ အခုလိုမျိုးပိတ်ထားတဲ့အတွက်ရော လူတွေက ဘယ်လိုမျိုး တုံ့ပြန်နေကြလဲ။ အဲ့အပေါ်မှာရော လူတွေက နားလည်ကြလားရှင့်။
ဒေါ် Virginia King သွယ်နိုင်ဝင်း။ ။သူတို့ကတော့ စိတ်တော့ မကောင်းကြဘူးပေါ့နော်။ နောက်တခု very sad ဘာတခုလည်းဆိုတော့ အဲ့ဒီ ဆုံးသွားတဲ့ မိသားစုတွေရဲ့ funeral မလုပ်ပေးနိုင်တာတို့၊ သွားမတွေ့နိုင်တာတို့ အဲ့ဒါကို သူတို့ အရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့ပဲ သူငယ်ချင်းတယောက် သူ့အမျိုးသားဆုံးသွားတယ်။ office မှာ mayb the first အဲ့တော့ သူ့အမျိုးသမီးက ကျမကို ပြောပြတယ်ပေါ့နော်။ သူ့အတွက် funeral ကို မသွားနိုင်တာ ဆုံးသွားတဲ့ last day ကို သူသွားမတွေ့နိုင်တာ အဲ့ဒါတွေတွက် အရမ်းကို စိတ်မကောင်းဘူး။ Very Painful ပေါ့နော်။
မစုမြတ်မွန်။ ။ အီတလီမြောက်ပိုင်းဒေသဆိုတာပေါ့နော်။ ဒီကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေ သိပ်ပြီးတော့ သွားလာတဲ့ဒေသဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။ အခုလိုမျိုး ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ရော ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေကို ဘယ်လောက်ထိ ထိခိုက်နေတာ မြင်ရလဲရှင့်။
ဒေါ် Virginia King သွယ်နိုင်ဝင်း။ ။ခရီးသွားလုပ်ငန်းကတော့ အကုန်လုံးငြီးတွားနေပါတယ်။ အမလည်း အဲ့ဒီမှာ သူငယ်ချင်းတွေတော်တော် ရှိတယ်ဆိုတော့ အကုန်လုံးအခက်အခဲပေါ့နော်။ cancellation တွေ ၀င်တာပေါ့နော်။ အထူးသဖြင့် ဧပြီလဆို Easter holiday လေ... ဖေဖော်ဝါရီတုန်းက သူတို့.... kings weekends တွေပေါ့နော်... အထူးသဖြင့် England ကဘာတို့က လာတာ အဲ့ဒါတွေကလည်း သူတို့ cancellation တွေ တော်တော်ဝင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းတွေ ပိတ်လိုက်တော့ ၀ုန်းဆိုပြီးတော့ local တွေက သွားကြတာ... အကုန်လုံးကို ပိတ်တယ်ဆိုတော့ estimate လုပ်ထားတာတော့ အီတလီအတွက်က Tourism မှာ ရှုံးတာ ၂ ဘီလီယံလောက်တော့ သူတို့ estimate လုပ်ထားတယ်။ ဒါကတော့ official statistic ပေါ့။ မေလအထိ booking တွေလုပ်ထားတာတွေတောင် cancellation တွေ ၀င်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ဧပြီမှာ အမှန်က အီတလီက အများကြီးကို ၀င်တယ်။ ဧပြီ၊ မေ ပေါ့နော်။ Easter ပြီးရင် မေလမှာဆို ဂျာမနီတို့ ဟောလန်တို့က အရမ်းဝင်တယ်လေ။ အဲ့ဒီဟာတွေလည်း သူတို့ cancellation တွေ တော်တော်ဝင်တယ်လို့ ပြောတယ်။
အီတလီနိုင်ငံမှာ Coronavirus ပိုးစတင်ကူးစက်လို့ Red Zone လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကနေ ကီလိုမီတာ ၄၀ သာဝေးတဲ့ Treviglio မြို့မှာနေသူ ဒေါ် Virginia King သွယ်နိုင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ Virus ပိုးကူးစက်မှု ပျံ့နှံ့မှုတားဆီးနိုင်ဖို့ ဒေသတခုကနေ တခုအသွားအလာတွေ ကန့်သတ်ထားတဲ့အပေါ် အီတလီလူမျိုးတွေ နားလည်ကြသလို အထိတ်တလန့်ဖြစ်တာမျိုး သိပ်မရှိကြတော့ဘူးလို့လည်း သူကပြောပြပါတယ်ရှင်။
တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ အခက်အခဲကြုံနေချိန်မှာ တယောက်နဲ့ တယောက်ကူညီပေးမှုတွေ များလာတဲ့အတွက် ဒါက အဆိုးထဲက အကောင်းလို့ပြောပြပါတယ်။
Covid-19 ဆိုးဝါးတဲ့ အီတလီနိုငျငံတှငျး သကျရောကျမှု
လကျရှိကမ်ဘာမှာ Coronavirus ပိုးဒုတိယမွောကျ အမြားဆုံးကူးစကျနတေဲ့ အီတလီနိုငျငံမှာ တနိုငျငံလုံး အသှားအလာတှေ မလိုအပျရငျ မလုပျကွဖို့ တားမွဈထားပါတယျ။ လုပျငနျးတှေ ကြောငျးတှေ ပိတျထားတဲ့ကွားက လုပျငနျးတှေ ဆကျလကျလညျပါတျနိုငျအောငျး ကြောငျးသားတှေ စာဆကျသငျနိုငျအောငျ ကွိုးစားလုပျနကွေတယျလို့ အီတလီမွောကျပိုငျးမှာနတေဲ့ မွို့ခံက ပွောပွပါတယျ။ လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးတှကေလညျး ဒုက်ခရောကျနသေူတှအေတှကျ အကူအညီပေးနိုငျဖို့ ကွိုးစားနကွေတယျလို့ ပွောပါတယျ အပွညျ့အစုံကို မစုမွတျမှနျက ပွောပွပါမယျ။
Coronavirus ပိုး ကမ်ဘာမှာ ဒုတိယမွောကျ ကူးစကျမှုအမြားဆုံး အီတလီနိုငျငံမှာ လကျရှိပိုးကူးစကျနသေူ တသောငျးကြျောနဲ့ သဆေုံးသူ ၆၃၀ ထကျမနညျး ရှိနပေါတယျ။ Virus ပိုးကူးစကျပြံ့နှံ့မှုကို တားဆီးနိုငျဖို့ အီတလီအစိုးရက တနိုငျငံလုံး တနရောကနေ တနရော သှားလာမှုတှကေို မလိုအပျရငျ မလုပျကွဖို့ တားမွဈထားပါတယျ။ ကြောငျးတှကေိုလညျး ပိတျထားသလို စီးပှားရေးလုပျငနျးတျောတျောမြားမြားကလညျး အကနျ့အသတျနဲ့သာ လညျပတျနကွေပါတယျ။ စားရေးသောကျရေးအတှကျ ဈေးဆိုငျတှဆေကျဖှငျ့ထားပမေဲ့ အဝငျအထှကျတှကေို ကနျ့သတျထားတယျလို့ Treviglio မွို့မှာနတေဲ့ ဒျေါ Virginia King သှယျနိုငျဝငျးက ပွောပွပါတယျ။
ဒျေါ Virginia King သှယျနိုငျဝငျး။ ။အခုတော့ super market တှေ တယောကျခငျြးပဲ သူတို့က သှငျးတယျလေ။ ဟိုလူတှေ ပွနျထှကျမှ ဝငျ အဲ့လိုပေါ့... အဝငျအပေါကျဝကို သူတို့လုပျထားတယျ။
တနိုငျငံလုံး အသှားအလာတှကေနျ့သတျထားခြိနျမှာ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှေ ကြောငျးတှကေတော့ လညျပတျမှု ရပျမသှားအောငျ ကွိုးစားနကွေတယျလို့လညျး ပွောပွပါတယျ။ Online ပျေါကနေ ဆကျပွီး အလုပျလုပျဖို့ ကွိုးစားနကွေတာဖွဈပါတယျ။
ဒျေါ Virginia King သှယျနိုငျဝငျး။ ။ ဒီ remote working တှလေုပျကွတယျ။ smart working လို့လညျး ချေါတယျ။ အီတလီကတော့ သူတို့ နာမညျတပျလိုကျတာပေါ့။ အဲ့ Technology သမားတှကေ အရမျးကို အလုပျလုပျနရေတယျ။ They trying to makeaplatform to work. ကြောငျးတှကေသာ ပိတျလိုကျတာ ဆရာတှေ၊ ဆရာမတှကေ အလုပျလုပျနရေတယျ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ ကလေးတှကေို homework တှေ ပေးရတယျ။ correct လုပျရတယျ။ သူတို့တှေ ညမိုးခြုပျ ၁၂ နာရီ အဲ့ဒီလောကျထိကို သူတို့ Prepare လုပျရတယျ။ ကလေးတှကေလညျး homework တှလေုပျရတယျဆိုတော့ ၆ နာရီကြောငျးတော့ မဟုတျဘူး။ သူတို့ homework တှတေော့ လုပျနရေတယျဆိုတော့... actually quite occupied ပေါ့။ ဒါပမေဲ့ ပွဿနာတှကေ မနတေ့နကေ့အထိ ကလေးတှကေ အပွငျကတော့ ထှကျလို့ရတယျလေ။ တယောကျနဲ့ တယောကျ ပူးကပျပွီးတော့ မနရေဘူးဆိုပွီး ပွောထားတော့ ကလေးတှကေ parks တှသှေားပွီးတော့ ပူးပူးကပျကပျနဲ့ အရမျးကစားကွတာဆိုတော့ နညျးနညျးတော့ ပွဿနာလေးတှေ နညျးနညျးတော့ ရှိတယျ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ အပွီး အိမျထဲမှာ လှောငျနတောမဟုတျဘူး။ အပွငျတှတေော့နညျးနညျးတော့ ထှကျကွတယျဆိုတော့။
မစုမွတျမှနျ။ ။ အီတလီဆိုတာကနျော။ မိသားစုတှေ အသိုငျးအဝိုငျးတှေ သိပျကို နီးနီးကပျကပျ ရှိကွတာပေါ့နျော။ ဆိုတော့ အခုလိုမြိုး အစိုးရက တောငျးဆိုထားတဲ့အထဲမှာလညျး အဖိုးအဖှားတှဆေိုရငျ မွေးတှနေဲ့တောငျမှ တကျနိုငျရငျ မတှတေ့ာမြိုးအထိတားထားတယျဆိုတော့ အခုလိုမြိုးပိတျထားတဲ့အတှကျရော လူတှကေ ဘယျလိုမြိုး တုံ့ပွနျနကွေလဲ။ အဲ့အပျေါမှာရော လူတှကေ နားလညျကွလားရှငျ့။
ဒျေါ Virginia King သှယျနိုငျဝငျး။ ။သူတို့ကတော့ စိတျတော့ မကောငျးကွဘူးပေါ့နျော။ နောကျတခု very sad ဘာတခုလညျးဆိုတော့ အဲ့ဒီ ဆုံးသှားတဲ့ မိသားစုတှရေဲ့ funeral မလုပျပေးနိုငျတာတို့၊ သှားမတှနေို့ငျတာတို့ အဲ့ဒါကို သူတို့ အရမျးစိတျမကောငျးဖွဈတယျ။ ဒီနပေဲ့ သူငယျခငျြးတယောကျ သူ့အမြိုးသားဆုံးသှားတယျ။ office မှာ mayb the first အဲ့တော့ သူ့အမြိုးသမီးက ကမြကို ပွောပွတယျပေါ့နျော။ သူ့အတှကျ funeral ကို မသှားနိုငျတာ ဆုံးသှားတဲ့ last day ကို သူသှားမတှနေို့ငျတာ အဲ့ဒါတှတှေကျ အရမျးကို စိတျမကောငျးဘူး။ Very Painful ပေါ့နျော။
မစုမွတျမှနျ။ ။ အီတလီမွောကျပိုငျးဒသေဆိုတာပေါ့နျော။ ဒီကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသှားတှေ သိပျပွီးတော့ သှားလာတဲ့ဒသေဖွဈတယျပေါ့လေ။ အခုလိုမြိုး ပိတျထားတဲ့အတှကျရော ခရီးသှားလုပျငနျးတှကေို ဘယျလောကျထိ ထိခိုကျနတော မွငျရလဲရှငျ့။
ဒျေါ Virginia King သှယျနိုငျဝငျး။ ။ခရီးသှားလုပျငနျးကတော့ အကုနျလုံးငွီးတှားနပေါတယျ။ အမလညျး အဲ့ဒီမှာ သူငယျခငျြးတှတေျောတျော ရှိတယျဆိုတော့ အကုနျလုံးအခကျအခဲပေါ့နျော။ cancellation တှေ ဝငျတာပေါ့နျော။ အထူးသဖွငျ့ ဧပွီလဆို Easter holiday လေ... ဖဖေျောဝါရီတုနျးက သူတို့.... kings weekends တှပေေါ့နျော... အထူးသဖွငျ့ England ကဘာတို့က လာတာ အဲ့ဒါတှကေလညျး သူတို့ cancellation တှေ တျောတျောဝငျတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကြောငျးတှေ ပိတျလိုကျတော့ ဝုနျးဆိုပွီးတော့ local တှကေ သှားကွတာ... အကုနျလုံးကို ပိတျတယျဆိုတော့ estimate လုပျထားတာတော့ အီတလီအတှကျက Tourism မှာ ရှုံးတာ ၂ ဘီလီယံလောကျတော့ သူတို့ estimate လုပျထားတယျ။ ဒါကတော့ official statistic ပေါ့။ မလေအထိ booking တှလေုပျထားတာတှတေောငျ cancellation တှေ ဝငျတယျလို့ ပွောတယျ။ ဧပွီမှာ အမှနျက အီတလီက အမြားကွီးကို ဝငျတယျ။ ဧပွီ၊ မေ ပေါ့နျော။ Easter ပွီးရငျ မလေမှာဆို ဂြာမနီတို့ ဟောလနျတို့က အရမျးဝငျတယျလေ။ အဲ့ဒီဟာတှလေညျး သူတို့ cancellation တှေ တျောတျောဝငျတယျလို့ ပွောတယျ။
အီတလီနိုငျငံမှာ Coronavirus ပိုးစတငျကူးစကျလို့ Red Zone လို့သတျမှတျထားတဲ့နရောကနေ ကီလိုမီတာ ၄၀ သာဝေးတဲ့ Treviglio မွို့မှာနသေူ ဒျေါ Virginia King သှယျနိုငျဝငျးဖွဈပါတယျ။ Virus ပိုးကူးစကျမှု ပြံ့နှံ့မှုတားဆီးနိုငျဖို့ ဒသေတခုကနေ တခုအသှားအလာတှေ ကနျ့သတျထားတဲ့အပျေါ အီတလီလူမြိုးတှေ နားလညျကွသလို အထိတျတလနျ့ဖွဈတာမြိုး သိပျမရှိကွတော့ဘူးလို့လညျး သူကပွောပွပါတယျရှငျ။
တနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ အခကျအခဲကွုံနခြေိနျမှာ တယောကျနဲ့ တယောကျကူညီပေးမှုတှေ မြားလာတဲ့အတှကျ ဒါက အဆိုးထဲက အကောငျးလို့ပွောပွပါတယျ။
မစုမြတ်မွန်/ VOA (Burmese)